Tommy's Love Stories: Girls' House - Chapter2(Final)
“ကဲ..ယုဝါ မင်းစိတ်တွေ လန်းဆန်းသွားအောင် ရေသွားချိုးလိုက်ပါလား…”
တိတ်ဆိတ်မှုကို ပျိုမေက စတင်ဖြိုခွဲလိုက်သည်။ ယုဝါကို မသိမသာတွန်းထုတ်ရင်း ပျိုမေ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ပြန်ထိန်းလိုက်သည်။
ယုဝါ လဲ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ အနီးရှိတဘက်တစ်ထည်ကောက်ဆွဲပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ခဲ့သည်။
“ငါဘာလို. အဲလောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါလိမ့်”
အ၀တ်တွေကို ချွတ်လိုက်ရင်း ရေပန်းအောက်ကို ၀င်ခဲ့သည်။ အေးစိမ့်သောရေအချို.က သူမစိတ်ကို အနဲငယ်လန်းဆန်းစေတာတော့အမှန်ပင်….
စိတ်ထဲက ၀တီ့အကြောင်းထက် ပိုးဂါဝန်အတိုနဲ့ ပျိုမေ့ရဲ့ ခြေသလုံးတွေကိုဘဲတွေးနေမိခဲ့သည်….
ဆပ်ပြာတိုက်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်မိတော့ တခါမှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးသော ခံစားချက်အချို.ဖြစ်လာပြီး၊ ပါးစပ်မှလဲ မသိမသာညည်းတွားမိလိုက်သည်…
ရုတ်တရက် ပျိုမေ့ကို သတိရပြီး စိတ်တွေထန်လာခဲ့ပြီ…. ရေချိုးနေရင်း ခပ်နွေးနွေးအရည်အချို. ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှ ထွက်လာတာကို သိလိုက်မိသည်…. မတတ်နိုင်တော့.....ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနဲငယ် စိတ်ဖြေသိမ့်ပြီးမှ ရေချိုးခြင်းကို ရပ်တန်.လိုက်သည်။
ရေချိုးပြီး ပတ်ဖို. တဘက်ကိုကြည့်တော့မှ သတိထားမိတာ၊ ယူလာခဲ့သည့် တဘက်က ဆိုက်သေးဖြစ်နေသည်။
ဒီတိုင်းဆို သူမခန္ဓာကိုယ်ကို ဒီတဘက်က လုံလုံခြုံခြုံမရှိနိုင်တာသေချာနေပြီ။ အမှန်တကယ်ဆို ပျိုမေ့ကို တဘက်အပိုတထည်လှမ်းတောင်ရင် ရနိုင်ပေမယ့် ဘာရယ်မသိ စိတ်က ပျိုမေ့ကို သူမရဲ့ ကြော့ရှင်းလှပတဲ့ ကောက်ကြောင်းအချို.ကို မြင်စေချင်သောကြောင့် ရသမျှနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို တဘက်နှင့် ဖုံးအုပ်ရင်း ထွက်လာခဲ့သည်။
ပျိုမေ ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်း တခုခုကိုတွေးနေပုံရသည်။
ယုဝါရေချိုးခန်းမှ ထွက်လာတာ သိသော်လည်း သူမဘက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘဲ၊ သူမလက်သည်းရှည်အချို့နှင့် ကုတင်အစွန်းကို ကုတ်ခြစ်နေသည်။ ဒါ ပျိုမေ စိတ်လှုပ်ရှားနေတတ်ချိန်မှာ လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်။
“…… ….” ယုဝါခေါ်လိုက်ပေမယ့် ပျိုမေဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေခဲ့သည်။
ခဏနေမှ ငုံ.ထားသောခေါင်းကို တဖြည်းဖြည်းမော့ရင်း၊ ယုဝါကို လှည့်မကြည့်ဘဲ ခပ်တိုးတိုးမေးသည်။
“တကယ်လို. ပျိုမေကလဲ ၀တီပြောသလို ယုဝါကို အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို. ချီးမွမ်းခဲ့ရင် တို.ကိုရော ချစ်မှာလား…”
“… ……” ဒီတခါ ဆွ.ံအသွားသူမှာ ယုဝါကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့သည်။
ဘုရားရေ….ပျိုမေက ယုဝါကို ချစ်နေခဲ့သည်တဲ့။ ယုဝါကိုယ်တိုင်ကရော…..
ယုဝါဘက်မှ အဖြေစကားမကြားရလို. ယုဝါကို လှည့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ ပျိုမေအသက်ရှူ ခဏရပ်တန်.သွားခဲ့ရသည်။
အိုး…..ယုဝါရယ်…လှလိုက်တာ… Venus နတ်သမီးတစ်ပါးလိုပင် သူမရဲ့လှပတဲ့ကောက်ကြောင်းအချို.နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ပျိုမေ့စိတ်တွေထန်လာစေသည်။ သူမကိုယ်သူမလဲ နားမလည်နိုင်တော့…. တစ်ခါမှ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အဲလိုစိတ်မျိုးနဲ့ မကြည့်ခဲ့မိပါဘူး။ အခုတော့….အခုတော့… သူမသွေးတွေဆူပွက်လာသလိုခံစားရသည်။
ယုဝါ ဘာမှပြန်မဖြေဘဲ ပျိုမေ့နံဘေးသို.၀င်ထိုင်ရင်း၊ ပျိုမေ့မျက်နှာကို သူမဘက်သို.ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။
ရုတ်တရက်ဆွ.ံအနေသော မိန်းမပျိုရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ထိကပ်စုပ်ယူခဲ့သည်။
၀ိုး…..ပျိုမေ့နှုတ်ခမ်းတွေက ချိုမြိန်လွန်းနေခဲ့တာ သူမ အသိနောက်ကျလေခြင်း….Damn…She’s so hot!!
မိန်းမပျို၂ဦး အနမ်းတွေ အငမ်းမရ စုပ်ယူ မြည်းစမ်းနေကြရင်း…. ပျိုမေ့ရဲ့ လက်အစုံက ယုဝါရဲ့ အ၀တ်မရှိသော ကျောပြင်ဘက်သို. ပွတ်သက်နေခဲ့သည်။
ယုဝါ အနမ်းကိုခဏရပ်ရင်း သူမချစ်သူအသစ်စက်စက်လေးကို ကြည်စယ်လိုက်သည်…
“မင်းလက်တွေ ကျောနောက်ဘက်မှာဘဲထားတော့မှာလား ပျိုမေ…”
“မင်း ကိုယ့်ကို ၀တီ့အကြောင်းထပ်မပြောတော့ပါဘူးလို. ကတိမပေးမချင်းပေါ့…”
ယုဝါ ခပ်ကျယ်ကျယ်ရယ်ရင်း..ပျိုမေ့ကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်သည်။
“အဲဒီကတိအတွက် မင်းကိုယ့်ကို ၀တီ.ထက် ပိုသာတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုမျိုး ပေးသင့်တာပေါ့ကွယ်….”
မိန်းမပျို၂ဦးရဲ့ မျက်လုံးတွေကတော့ အချစ်တွေ မွတ်သိပ်စွာနှင့် တောက်ပရင်း……. ခန္ဓာကိုယ်၂ခု တဖြည်ဖြည်းချင် ထိကပ်သွားခဲ့သည်……
Posted by Tommy Girl at 12:22 AM